Sat, Jul 11, 2020 at 2:02pm
​जन्ती बोकेको जिप पाल्पामा दुर्घटना, ५ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु
पाल्पा, १६ वैशाख पाल्पाको निस्धि गाउँपालिका ७ मा जन्ती बोकेको जिप दुर्घटना हुँदा ५ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ । निस्धिको भवास भन्ने स्थानमा लु १ ज १९४१ नम्बरको जन्ती बोकेको जिप दुर्घटना भएको पाल्पा प्रहरी प्रमुख एसपी विश्वमणि पोख्रेलले जानकारी दिए । घटना भएलगत्तै प्रहरीको एक टोली घटनास्थलतर्फ गएको एसपी पोख्रेलले जानकारी दिए । घटनाको विस्तृत विवरण आउन बाँकी छ ।..
राजधानीको कोटेश्वरमा ‘पिक एण्ड ड्रप’ व्यवस्था लागू
काठमाडौँ, १६ वैशाख । उपत्यकाको प्रमुख चोक कोटेश्वरमा ‘पिक एण्ड ड्रप’ व्यवस्था लागू गरिएको छ । ट्राफिक प्रहरी, काठमाडौँ महानगरपालिका र यातायात व्यवसायीबीच यसअघि भएको सहमतिअनुसार आइतबारदेखि कोटेश्वर चोकमा ‘पिक एण्ड ड्रप’ व्यवस्था लागू गरिएको हो । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तकुमार पन्तले कोटेश्वरमा ‘पिक एण्ड ड्रप’ व्यवस्था लागू गरेसँगै सवारी जाममा कमी हुने बताउनुभयो । “धेरै सवारी साधन..
सवारीसाधनको तिब्र गतिले निकुञ्जमा जनावर मर्ने क्रम बढ्दो
वीरगञ्ज, १५ वैशाख । बाराको पथलैयादेखि अमलेखगञ्ज तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग क्षेत्रमा अत्याधिक गतिमा सवारीसाधन चलाउँदा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका जनावर सवारीसाधनको ठक्करबाट मर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । प्रदेश नं २ को एक मात्र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यभाग भएर सडक विस्तार भएपछि त्यस क्षेत्रमा अत्यधिक गतिमा सवारीसाधन चलाउँदा जनावर ओहोरदोहोर गर्ने क्रममा ठक्कर लागेर मर्ने क्रम बढ्दै गएको निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत..
जथाभावी राखिएका बस र टिकट काउन्टर ७ दिनभित्र हटाउदै प्रहरी
काठमाडौँ, १५ वैशाख । ट्राफिक प्रहरीले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा जथाभावी राखिएका बस टिकट काउन्टर सात दिनभित्र हटाउने भएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले उपत्यकाको गौशाला, कलङ्की, कोटेश्वर, सुन्धारालगायत स्थानमा जथाभावी टिकट काउन्टर राख्दा सवारी साधनको आवागमनमा समस्या परेकाले सात दिनभित्र हटाउने जनाएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा केही दिनअगाडि बसेको ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवसायीको बैठकले नयाँ बसपार्क तथा अन्य ठाउँमा..
यती एयरलाइन्सको सेवा विस्तार : चौँथो ‘ATR’ जहाज विमानस्थलमा अवतरण
काठमाडौँ, १४ वैशाख । निजी क्षेत्रको अग्रणी वायु सेवा प्रदायक कम्पनी यती एयरलाइन्सले आफ्नो सेवा विस्तारका क्रममा चौँथो ‘एटीआर–७२–५००’ जहाज भित्र्याएको छ । नाइन् एन एएनसी जहाज थाइल्याण्डको राजधानी बैंककबाट उडेर शुक्रबार दिउँसो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो । व्यावसायिकतासँगै सरकारले घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्षलाई सहयोग पुर्याउने लक्ष्यका साथ यतीले जहाज थपेको हो । सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रुपमा मनाएर..
धनगढी उपमहानगरले सडक क्षेत्रका संरचना आफै हटाउने घरधनीलाई सम्मान गर्ने
घनगढी, १३ बैशाख । धनगढी उपमहानगरपालिकाले सडकको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका संरचना आफै हटाउने घरधनीलाई सम्मान गर्ने घोषणा गरेको छ । आयोजना निर्माणका क्रममा सडकको क्षेत्राधिकारभित्र समेत कतिपय निजी संरचना छन् । आयोजना अन्तर्गतको बजेटले सडक निर्माण र कालो पत्रेका लागि डिजाइन तयार गरेर ठेक्‍का प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । उपमहानगरले क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत निर्माण हुने सडकमा परेका संरचना हटाउने घरधनीलाई सम्मान गर्ने घोषणा..
जेट एयरवेजको उडान बन्द भएसँगै एयरलाइन्स कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा सुरु
काठमाडौँ, १३ वैशाख जेट एयरवेजको उडान बन्द भएपछि काठमाडौं-दिल्लीको बजार हिस्सा लिन एयरलाइन्स कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ। यो रुटको बजार लिन सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगम र भारतीय वायुसेवा कम्पनी इन्डिगोले उडान थप्दैछ। जेटले दिल्ली-काठमाडौं दैनिक चारवटा उडान गर्दै आएको थियो। निगमले वैशाख १८ गतेदेखि दैनिक दुई वटा उडान गर्ने भएको छ। जेटले उडान भर्दा निगमले दैनिक एउटा मात्रै उडान गरेको थियो। निगमका..
अर्चलेमा पहिलोपटक बस पुग्यो, खुशी हुँदै बस चालक र स्थानीयवासी
बेझाड, १२ वैशाख निस्दी गाउँपालिका–६ को अर्चलेमा पहिलोपटक बस पुगेको छ । पश्चिमाञ्चल बस व्यवसायी समितिद्वारा सञ्चालित लु१ख ४६९७ नंको बस बुधबार पहिलोपटक पुगेको हो । गाउँमा पहिलोपटक बस पुगेपछि बस चालक र समितिका पदाधिकारीलाई यहाँका स्थानीयवासीले खुशी हुँदै स्वागत गरेका थिए । बालबालिकादेखि युवायुवती, वृद्धवृद्धा बस आएको देखेपछि खुशीले उत्साहित हँुदै हेर्नेको ठूलो भीड रहेको होम राई मगरले बताउनुभयो । पुलबजार, डियाङ्बारी,..
‘जेब्राक्रस’ बनाउँदै ट्राफिक प्रहरी, कुद्दै–भाग्दै बाटो काट्दै अनविज्ञ पैदलयात्रु
बाँके, ११ वैशाख गाउँहरु शहरोन्मुख भइरहेका छन् । बजार क्षेत्र तीव्ररुपमा वृद्धि भइरहेका छन् । टोल गाउँ बनेका छन्, गाउँ शहर बनेका छन् तर यातायात, सडक, खानेपानीलगायतका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र सोअनुसार वृद्धि हुन सकेको छैन । मुलुक सङ्घीय संरचनामा आइसकेपछि स्थानीय तहमा केही परिवर्तनको अनुभूति भने पक्कै देखिन थालेको छ् । गाउँका धुलाम्ये सडक ग्राभेल बन्न थालेका छन्, शहरका ग्राभेल सडक कालोपत्रे..
डडेल्धुरा बस दुर्घटना : ५ को मृत्यु, ३४ घाइते (नामावलीसहित)
डोटी, ११ वैशाख डडेल्धुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका–१ साहुँखर्कमा बुधबार बिहान कर्णाली रिभर यातायातको बस दुर्घटना भएको छ । दुर्घटनामा पाँच जनाको मृत्यु भएको र ३४ जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ । कैलालीको धनगढीबाट बझाङका लागि छुटेको ना ४ ख १८३१ नम्बरको बस डडेल्धुराको साहुँखर्कमा आज बिहान करीब ४.३० दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेमा बझाङ..
डडेलधुरामा बस दुर्घटना : ६ जनाको मृत्यु, २६ घाइते
डडेल्धुरा, ११ वैशाख । डडेल्धुराको भिदत्तराजमार्गको साउखर्कमा बस दुर्घटना हुँदा ५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३४ जना घाइते भएका छन् । धनगढीबाट बझाङतर्फ गइरहेको ना६ख १८३१ नंको यात्रुबाहक बस डडेल्धुराको साउखर्क नजिक बुधबार बिहान ५.३० बजे दुर्घटना हुँदा ६ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । दुर्घटनाको कारण क्षमता भन्दा बढी यात्रु भएको प्रारम्भिक जानकारीबाट खुल्न आएको छ । बसमा..
दमौली, १० वैशाख पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत तनहुँको दमौलीमा मंगलबार माइक्रोबसको ठक्करबाट स्कुटर चालकको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा ब्यास नगरपालिका–१० परेवाडाँडाका २३ वर्षीय रमेश शर्मा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । पोखराबाट काठमाडौतर्फ जाँदै गरेको ग १ य ४८५ नं को माइक्रोले भित्री सडकखण्डबाट राजमार्गतर्फ आउँदै गरेको ग १३ प ९१८१ नं को स्कुटरलाई ब्यास नगरपालिका–४ शहीदगेट नजिक ठक्कर दिएको थियो । ठक्करबाट..
लुक्लाबाट आएको तारा एयरको जहाज धावनमार्गबाट चिप्लिएपछि...
काठमाडौं, ९ वैशाख । तारा एयरको विमान रामेछापको मन्थली विमानस्थलमा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ । तर भाग्यवश मानवीय क्षति भएको छैन । लुक्लाबाट आएको तारा एयरको जहाज अवतरणको क्रममा धावनमार्गबाट चिप्लिदा रामेछापको मन्थली विमानस्थल बन्द भएको छ । सोमबार बिहान ताराको ‘नाइन एनएकेके’ नेपाली दर्ता नम्बर भएको ट्विनटर जहाजको रनवेमा चिप्लिएको थियो । हाइड्रोलिकमा समस्या आएर चिप्लिएको हुनसक्ने विमानस्थल कार्यालयको प्रारम्भिक अनुमान छ । जहाज..
जन्ती लिएर आउँदै गरेको जीप दुर्घटना, १ जनाको मृत्यु
बझाङ, ८ वैशाख खप्तड छान्ना गाउँपालिका– ४ बाट जयपृथ्वी नगरपालिका सुवेडातर्फ जन्ती लिएर आउँदै गरेको से१ज ७१८ नंको जीप दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । सात जना घाइते भएका छन् । खप्तड छान्ना गाउँपालिका– २ को बाँसपाटामा भएको दुर्घटनामा परी खप्तड छान्ना गाउँपालिका– ४ का ६० वर्षीय वासुदेव जोशीको मृत्यु भएको स्थानीयवासी केशवराज जोशीले जानकारी दिनुभयो । दुर्घटनामा परी चालकसहित..
काठमाडौँ, ८ वैशाख राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले को नयाँ दिल्लीमा उडान थप गरेको छ । भारतीय वायुसेवा प्रदायक कम्पनी जेट एयरले काठमाडौँ उडान स्थगित गरेका कारण निगमले दिल्ली उडान थपेको हो । निगमले आगामी वैशाख १८ (मे १ देखि) काठमाडौँ नयाँदिल्ली सातामा १४ उडान भर्ने जनाएको छ । उक्त गन्तव्यमा अहिले निगमले सातामा ११ उडान भर्दै आएको..
जुम्लाका ७ स्थानीय तह दमकलविहीन
खलङ्गा, ८ वैशाख जुम्लाका सात स्थानीय तह दमकलविहीन बनेका छन् । जुम्लाको एकमात्र चन्दननाथ नगरपालिकामा दमकल भए पनि चलाउने चालक नहुँदा थन्किएको छ । अन्य सात गाउँपालिकामा भने दमकल छैन । जिल्ला आपत्कालीन कार्य सञ्चालन के न्द्र जुम्लाको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा बाह्रै महीना आगलागीको उच्च जोखिममा देखिएको छ । आगलागीका घटना भए त्यसलाई निभाउन पर्याप्त स्रोत साधन नहुँदा धनजनको क्षति धेरै हुने गरेको..
सडक विस्तार कार्यले राप्ती राजमार्ग २५ गतेसम्म दिनभर बन्द
तुलसीपुर, ७ वैशाख । राप्ती लोकमार्गअन्तर्गत तुलसीपुर–सल्यान खण्डमा राम्री घुम्तीमा तेइस विद्यार्थीको मृत्यु भएकाले त्यसलाई विस्तार गर्न तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–३ को उक्त स्थानमा शनिबारदेखि वैशाख २५ गतेसम्म दैनिक नौ घण्टा सडक बन्द गर्ने सहमति भएको तुलसीपुर ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख चन्द्र केसीले बताए । उनका अनुसार बिहान ११ बजेदेखि ४ बजेसम्म र राति १ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म सडक बन्द गरेर काम गर्ने..
काठमाडौँ-नयाँ दिल्लीको हवाई भाडा तीनगुणा महङ्गो
काठमाडौँ, ६ वैशाख भारतीय विमानसेवा कम्पनी जेट एअरवेजले आफ्ना सम्पूर्ण उडान अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेसँगै नेपालबाट भारतका विभिन्न गन्तव्यको हवाई भाडा अकासिएको छ । काठमाण्डूदेखि नयाँ दिल्लीसम्मको भाडा तीन गुणासम्म बढेको पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन् । जेट एअरवेज सञ्चालनमा रहँदासम्म सालाखाला १८-१९ हजार नेपाली रूपैँयामा पाइने काठमाण्डू-दिल्लीको दुईतर्फी टिकटको मूल्य अहिले ६५ हजारको हाराहारीमा पुगेको व्यावसायीहरूले बताएका हुन् । झण्डै १.२ अर्ब अमेरिकी डलर ऋणको..
उपत्यकामा ३ करिडोर निर्माण, सवारी आवतजावतमा सहज
काठमाडौँ, ५ वैशाख ट्राफिक प्रहरीले उत्पत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन तीनवटा करिडोर सञ्चालनमा ल्याएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन तथा प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजनाअन्तर्गत बालकुमारी पुल, गोपीकृष्ण पुल र भत्केको पुलमुनिको करिडोर सञ्चालनमा ल्याएको हो । करिडोर सञ्चालनमा आएसँगै ठूला तथा साना सवारी साधन करिडोर हुँदै आवतजावत गर्न थालेपछि सवारी आवतजावतमा सहज हुनाका साथै दुर्घटनामा कमी आएको महाशाखाका प्रहरी नायब..
संसारकै डरलाग्दा १० विमानस्थलमध्ये एक लुक्ला विमानस्थल !
सोलुखुम्बु, ५ वैशाख समुन्द्री सतहबाट दुई हजार आठ सय मिटरको उचाइमा रहेको, पाँच सय २७ मिटर लम्बाइ र २० मिटर चौडाइ भएको लुक्ला विमानस्थलको धावनमार्ग अन्य विमानस्थलभन्दा छोटो भएकाले उडान र अवतरण दुवै कठिन हुने हवाईविज्ञहरु बताउने गर्छन् । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ । उडान र अवतरणका बेला अचानक समस्या देखिए कुनै वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसकिने भएका कारण लुक्ला विमानस्थल..
“मौसम खराबीले उडान रोक्न सकिएन, सञ्चारमन्त्री छुट्नुभयो”
काठमाडौँ, ४ वैशाख । मौसम खराबीका कारण सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको मंगलबार भैरहवाबाट काठमाडौँ उडान छुटेको बुद्ध एयरले स्पष्ट पारेको छ । सञ्चारमन्त्री छुटेको समाचार सञ्चार माध्यममा छाएपछि बुद्ध एयरले विज्ञप्ति निकालेर ६८ यात्रुको संवेदनशिलतालाई मध्यनजर गर्दै उडान रोक्न नसकिएको जनाएको छ । काठमाडौँ–भैरहवाको उडान नं ८५७, उडान समय साँझ चार बजेको सट्टा काठमाडौँ विमानस्थलको मर्मत र मौसमको खराबीको कारणले उक्त उडान बेलुका..
Results 1271: You are at page 19 of 43